AKHRISO:- Aqalka sare oo meel mariyay xeerka dhismaha guddiga la dagaallanka musuqa – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaAKHRISO:- Aqalka sare oo meel mariyay xeerka dhismaha guddiga la dagaallanka musuqa
Hiiraan Xog, Golaha aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta isugu yimid mid ka mid ah kal fadhiyada golaha ayaa lagu ansixiyay hindise sharciyeedka dhismaha guddiyada madaxa bannaan ee la dagaallanka musuqmaasuqa.
Kulanka maanta dhacay ayaa ahaa kulankii 9-aad ee kalfadhiga afraad ee golaha waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha aqalka sare, mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Ajandaha maanta horyaallay kulanka xildhibaannada aqalka sare ayaa ahaa akhrinta 3-aad ee hindise sharciyeedka dhisidda guddiga madaxa bannaan ee la dagaallanka musuqmaasuqa oo ay horay ay usoo meel mariyeen golaha shacabka.
Kulanka ayuu goob joog ka ahaa wasiirka waasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Xuseen Xaaji.
Marwo Zamzam Ibraahim Cali guddoomiyaha guddiga garsoorka ayaa xildhibaannada ka hor akhrisay hindise sharciyeedka iyada oo farta ku fiiqday in meelaha qaar lagu sameeyay wax ka badal iyo turxaan bixin faahfaahsan.
Ugu dambeyntii golaha oo cod galiyay ansixinta hindisaha ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay meel marinta hidise sharciteedka.
31 xildhibaan oo fadhiyay golaha ayaa dhamaantood u codeeyay meel marinta dhismaha guddiga taasoo suura galinaysa in wixii haatan ka dambeeya la guda gali doono dhismaha guddigaas kadib marka uu qalinka ku duugo madaxweynaha qaranka.
Aalaabaa golayaasha sharci dajinta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn isugu howla dib usoo nooleynta shuruucdii dalka iyaga oo kaashanaya wasaaradaha kala geddisan ee xukuumadda oo kolka hore golaha hor keena hindisayaal sharciyeed ay doonayaan in goluhu uu ka doodo turxaan bixin kadibna loo meel mariyo.
Golayaasha sharci dajinta ee dowladda waxaa hor yaalla tiro sharciyo ah oo dhammaantood qeyb ka ah sidii dalka uu u yeelan lahaa shuruuc dhamaystiran oo lagu kala hago